मतदाताले मलाई राम्रोसँग बुझेका छन्– अमरबहादुर डाँगी – Janaubhar
मतदाताले मलाई राम्रोसँग बुझेका छन्– अमरबहादुर डाँगी
प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक २९, २०७४ | 232 Views ||
प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ प्रदेश सभा २
प्रदेश सभा सदस्यमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । म राजनीतिमा लागेदेखि अहिलेसम्म जिल्लाको विकासमा निरन्तर लागिरहेको छु । तत्कालीन घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर हुँदा होस् या शिक्षण पेशामा रहँदा मैले सधैं जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य क्षेत्रको विकासका लागि योगदान दिइरहेको छु ।
म सामान्य परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हुँ । जीन्दगीका शुरुका चरणमा हाम्रो परिवारलाई दैनिक चलाउन पनि निकै मुश्किल पथ्र्याे । मैले कक्षा १० सम्म मात्र विद्यालय जाने अवसर पाए । सधैं विद्यालय जान पाइदैन थियो । त्यही पनि म परीक्षामा राम्रो अंक लिएर पास गर्थें । म जीवनको लामो समय राजनीतिमै लागेको छु । मसँग जिल्लालाई विकास गर्ने धेरै योजनाहरु छन् । ती योजना कार्यान्वयनका लागि म प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको हु । आम मतदाताको सहयोगले म प्रदेश सभामा विजयी हुनेछु भन्ने आशा लिएको छु ।
तपाई प्रदेश सभा सदस्य भइसकेपछिका योजना के छन् ?
प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । परम्परागत शिक्षाबाट उत्पादन भएको जनशक्ति बेरोजगार भइरहेको छ । मैले यस क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना गर्ने सोच बनाएको छु ।
अर्को कुरा हामीले उत्तरबाट दक्षिणी सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ । मैले उत्तर दक्षिण हुँदै सिधै रिहार पुग्ने सडक निर्माणका लागि पहल गर्नेछु । यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा मेरो विशेष ध्यान जानेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु. ५ हजार पु¥याइने छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सबै किसिमका यातायातमा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण तथा न्यानो कपडाका लागि स्थानीय तहमार्फत् रु. ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ । सहकारी अभियानमार्फत् धेरै भन्दा धेरै जनतालाई आबद्ध गराई उत्पादन, खरिद र बिक्री सहकारी मार्फत् गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रत्येक परिवारमा कम्तीमा एक सदस्यले रोजगारी पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
कृषि तथा अन्य स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगहरुको विकास गर्दै ठूला उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालन गरिने छ । चुरेमा प्रचूर मात्रामा खर, बाँवियो यो तथा रेशा युक्त पातको जंगल भएकाले यसको उपयोगका लागि कागज उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने छ । साथै पराल, गहुँको छ्वाली र मकैको ढोडको उपयोगको लागि पनि यसलाई प्रयोग गरिने छ । मासु, दूध, फलफूल आदिका लागि आधुनिक कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने छ ।
आम मतदाताले तपाईलाई नै मतदान गर्नुपर्ने कारण के ?
यो त मतदाताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । म यहाँका मतदातासँग चिरपरिचित छु । उहाँहरुले मेरो आनीवानी र मेरो स्वाभाव बुझि सक्नु भएको छ । मैले यसअघि शिक्षा क्षेत्र तथा समग्र विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरेको योगदानको वारेमा आम मतदातालाई राम्रोसँग जानकारी छ । अर्को कुरा अब टुक्रे विकासले मुलुकको समग्र विकास सम्भव छैन । हामीले वृहत योजना सहितको विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने छ । मलाई यस क्षेत्रको विकास वारेमा राम्रो जानकारी छ । म बृह्द विकासको योजना तयार पारेर यस क्षेत्रको विकास गर्नेछु ।
Prevसमानुपातिक उम्मेदवार दामा शर्मा भन्छिन्– ‘संविधान बनाइयो, अब जनतासँगै विकास कार्यमा लाग्नेछु’
Nextम सँग विकासको प्रष्ट खाका छ- जगप्रसाद शर्मा